Isla de Lobos: Chii chaungaone muparadhiso diki iyi muCanary Islands | Absolut Kufamba
Isla de Lobos: Chii chaungaone muparadhiso diki iyi muCanary Islands
Alberto Makumbo | | Canary Islands, España
Munzvimbo iri pakati peLanzarote neFuerteventura, chitsuwa chinokwira ichivimbisa nzvimbo yatakauya kuzotsvaga muCanary Islands: nyika dzinoputika, mvura inonaya uye kuratidzwa kwakasiyana-siyana kwemhuka nezvinomera zvinoumbwa Lobos Island, inozivikanwawo seIslote de Lobos.
1 Nhanganyaya kuIsla de Lobos
2 Chii chaungaona paIsla de Lobos
3 Ungasvika sei kuIsla de Lobos
Nhanganyaya kuIsla de Lobos
Vanoti, kubva panguva dzekare, shumba dzegungwa dzaive dzakabatana nechimwe chitsuwa chiri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweFuerteventura uye maodzanyemba akadziva kumadokero kweLanzarote, muCanary Islands. Zvakawandisa vaRoma uyo akauya kune anokosha Isla de Lobos achitsvaga inki yepepuru yakatorwa mumamollusk, senge french kuti pakutanga kwezana remakore reXV, vakauya kuzochengetera mhuka idzi dzakanaka pane imwe nguva. . .
Kune aya epakutanga episodes, zvinodikanwa kuwedzera kusvika kweakasiyana vapambi vakapotera pachitsuwa ichi vachitora mukana wevanhu vasina kubudirira, chimwe chinhu chaizochinja pakupera kwezana ramakore rechi1860. Kunyanya, muna XNUMX umo kuvakwa kwe Punta Martiño mwenje aizoisa guta diki pamawere aro. Izvozvowo zvaizoita nzira yazvo pachitsuwa ichi cheAtlantic mhepo nemafungu makuru ayo, pavanodzokera shure, vanoratidza maraki nemabhishi edenga rebhuruu ari mune zvishoma 4,5 mativi emakiromita ekuwedzera.
Nyika yakarasika inonyatsoratidza kupona kwevagari vekutanga avo, mukati mehafu yekutanga yezana ramakore rechimakumi maviri, vakaita nzira yavo nekuda kwekuredza kana kuvakwa kwecorralitos (denderedzwa zvivakwa zvakagadzirwa nematombo) kuitira kutora mvura yemvura. kurarama.
Akaziviswa Corralejo Natural Park, guta reFormentera uye taundi repedyo nechitsuwa, ino nzvimbo yave kwete chete inhengo ye Natura 2000 Network, asi zvakaziviswa zvakare Nzvimbo inokosha yekudzivirira shiri (ZEPA), ichibatanidza kukosha kwayo kwakanyanya.
Iwe ungade here kudzoka kumashure munguva uye kurasika muye kurota senge Isla de Lobos?
Chii chaungaona paIsla de Lobos
Kuva kumasipala weLa Oliva, muFuerteventura, Isla de Lobos ndiyo nzvimbo kwayo sekuwedzera kwezuva rimwe kumazororo edu muFuerteventura yambotaurwa kana kuti Lanzarote iri pedyoOse akaomarara maparadhiso ekurara makomo, anodzidzira mitambo yemvura uye mahombekombe egungwa.
Inowanikwa kubva kwakasiyana mapoinzi, kunyanya iro guta reCorralejo, Isla de Lobos inotenderera La Caldera, iyo yepamusoro soro mundima ine 127 metres pakakwirira. Chikonzero chakakwana chekusarudza zuva rakakwenenzverwa rekufamba musango (isu tinokuudza chikonzero nei gare gare) kubva pakuburuka kwako muchiteshi uye nenzira yakatenderera.
Yakaomarara uye isinganzwisisike, iyo Isla de Lobos inovimba kunyanya pakuvapo kwemahombekombe akasiyana anoita paradhiso pasi pano Turquoise bhuruu mvura inonamatira nyika dzinoputika uye kuunganidza kugomera kwevamwe shumba dzegungwa, dzinozivikanwawo sema monk seals, ane huwandu hwevanhu hwakadzikira zvakanyanya makore mazhinji apfuura, vachisiya chete ndangariro yavo mukati memvura.
Pakati pevamwe ve Isla de Lobos mahombekombe kuti iwe unogona kunakidzwa, izvi ndizvo zvakanakisa:
La Concha pamhenderekedzo: Mune chimiro chehafu yemwedzi uye inozivikanwawo seLa Caleta, iri gungwa riri munzvimbo yekumadokero uye inopa anotaridzika maonero emhenderekedzo yeFuerteventura. Playa de la Concha iparadhiso iri yakati wandei kubva kune mamwe mahombekombe anoshanya pachitsuwa ichi. Akazara matombo anoputika anoratidzira zvakatowanda bhuruu (kunyangwe nematoni emaradhi).
El Puerto Rico: Iyo inonyanya kuzivikanwa (uye nekudaro inowanzo shanyirwa) pamahombekombe paIsla de Lobos inosanganisira ingangoita mhandara kumahombekombe akayambuka nemugwagwa wedanda uyo unokukoka iwe kusvetuka uchitsvaga ekare mermaids. Bhuruu uye yekudenga, iri gungwa zvakare rakanakira kudzidzira mitambo yemvura senge snorkeling.
The Calera: Kana iwe paunosvika pachiteshi ukasarudza kutora nzira kuruboshwe, uchasangana neLa Calera, idyllic pamhenderekedzo ndiyo yakanakisa chikumbaridzo paunenge uchisvika mungano yeMartiño Lighthouse, maminetsi makumi mana netsoka.
The Lagoons: Kana iwe ukaenderera wakananga kuimba yemwenje kubva kuLa Calera, iwe unowana ino nharaunda yemadziva echisikigo uko iwe kwaunogona kuona akawanda egungwa shiri dzinouya mukutsvaga iyi yakasarudzika oasis.
Ungasvika sei kuIsla de Lobos
Imwe yesarudzo dzakanakisa kana uchienda kuIsla de Lobos inowanzo kutora ngarava yemahara kubva kuCorralejo, muFuerteventura. Imwe sarudzo yakazara ndeyekubhadhara a catamaran excursion, iyo inowanzo sanganisira chikafu uye zvishandiso zve snorkeling mubhodhi.
Nekudaro, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti kubva muna Ndira 2019, Isla de Lobo akashandisa zvimwe zvausingakwanise kana zvasvika pakudzora zvirinani kugona kwenzvimbo ino.
Nenzira iyi, ikozvino zvinogoneka chete bhuku rwendo 3 mazuva pamberi uye kune vanopfuura vanhu vatatu. Panguva imwe, kugara pachiwi kunogumira kumaawa mana (Kupa muenzaniso, kutora rwendo kuenda kunhongonya yeLa Caldera kunotora anopfuura maawa matatu, saka iwe unofanirwa kuronga kushanya kwako uye zvaunokoshesa zvakanaka).
Maawa ekuwana kuIsla de Lobos akapatsanurwa kuita mangwanani (Kubva 10:00 a.m. kusvika 14:00 p.m.) uye masikati (Kubva 14:00 p.m.kusvika 18:00 p.m.), tichiremekedzwa zvakaenzana nezvikepe zvese zvinofamba zuva nezuva kubva kuFuerteventura kana, kashoma, Lanzarote.
Kana iwe ukafunga kushanyira Isla de Lobos mushure mekubhadhara chikepe, mutengo uri kutenderedza 15 euros yevakuru uye 8 yevana nepo rwendo rwunotora maminetsi makumi maviri chete.
Kana iwe uri kufunga nezvekutsvaga yakasarudzika paradhiso semubatsiri wezororo rako muCanary Islands, Isla de Lobos inokusimbisa iwe ingangove yeMartian kona yerunyararo nerunyararo. Kufemera mumhepo yakachena, kushambira mumadhamu asingakundwe uye kupedzisa nedoro pachiteshi usati waenderera mberi nekutsvaga zvimwe zveCanary Islands izvo zvinonyanya kufananidzwa nerunako, mashiripiti uye bhuruu rinozadza zvese.
Ungade here kushanyira Isla de Lobos panguva yako yekuenda kuCanary Islands?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Isla de Lobos: Chii chaungaone muparadhiso diki iyi muCanary Islands